“अमेरिका र भारतको योजनामा ओलीबिरुद्ध प्रदर्शन” – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय समाचार/“अमेरिका र भारतको योजनामा ओलीबिरुद्ध प्रदर्शन”
“अमेरिका र भारतको योजनामा ओलीबिरुद्ध प्रदर्शन”
काठमाडौं । विगत केही दिनदेखि सरकारविरुद्ध सडकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट सुरु भएको प्रदर्शन अहिले देशव्यापी बनेको छ । पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, हेटौंडा, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, जनकपुरलगायत देशका ठूला सहरमा स्वस्फूर्त प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
प्रदर्शनमा अधिकांश युवायवुती छन् । उनीहरूले कुनै दलको झन्डा हातमा बोकेका छैनन् । मात्र राष्ट्रिय झन्डा बोकेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काम गर्न नसकेको भन्दै नाराबाजी गरिरहेका छन् । तिनै राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने युवा तन्नेरीलाई प्रहरीले लाठीचार्ज मात्र होइन, पानीका फोहरा र अश्रुग्याँस प्रहार गरेको छ ।
युवा तन्नेरीको मुख्य टार्गेट प्रधानमन्त्री केपी ओली बनेका छन् । प्रदर्शनमा लगाइएका नारा अचम्म खालका छन् । कसैले एमसीसी पारित गर्न पाइँदैन भनेका छन् । कसैले नेपाली भूभाग फिर्ता लेऊ भनेका छन् । कसैले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको, स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार भएको, आरडिटी होइन, पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाऊ, सरकारी ढुकुटीको १० अर्ब खोइ ? लगायतका प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी भइरहेको छ । हेर्दा सबै नारा र माग सही जस्तो लाग्छ । तर, यत्रो विशाल प्रदर्शनको पछाडि कुन शक्तिको हात छ ? भनेर कसैले भन्न सकेको छैन ।
धेरैले यो प्रदर्शनमा अमेरिका र भारतको हात रहेको अनुमान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन खोजेकाले उनलाई हटाउन भारतले खेलेको भन्नेहरूको कमी छैन । कोही भने अमेरिकी फन्डमा एमसीसी पारित गराउन युवालाई सडकमा ओरालिएको अनुमान गर्न थालेका छन् ।
चीन-भारतसँग नराम्रोसँग पराजित भएको, ६० सैनिकको मृत्यु भएको खुलासा !
कोरोना भाइरसका बिरामीको सेवा गर्दागर्दै बेलायतमा यी नर्स आफैले गुमाइन ज्या-न !
रहेनन बलिवूद कलाकार सुशान्त सिंह राजपूत,उनले ३४ बर्ष को उमेरमा आज आ,त्महत्या गरेका हुन
अमेरिका एक शवगृहको बाहिर ट्रकमै भेटिए दर्जनौ शव